WARBIXIN: 8 Xaqiiqo Oo Aad U Baahantahay In Aad Ka Ogaado Isku Aadka Wareega 16-ka Ee Champions Leageu – Kooxda.com
Home 2017 December France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 8 Xaqiiqo Oo Aad U Baahantahay In Aad Ka Ogaado Isku Aadka Wareega 16-ka Ee Champions Leageu
WARBIXIN: 8 Xaqiiqo Oo Aad U Baahantahay In Aad Ka Ogaado Isku Aadka Wareega 16-ka Ee Champions Leageu
December 11, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Waxa si Rasmi ah loo soo saaray isku aadka champions league wareega 16-ka waxana soo baxay warar xiiso leh oo si weyn loo wada sugayo.
Kulamada sida weyn loo sugayo ayaa ah kulamada Real Madrid Vs PSG iyo Barcelona Vs Chelsea kuwaas oo ah kulamo aad u xiiso leh ah.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaan xog ku saabsan isku aadka iyo kooxaha isku dhacay tartanka champions league:
** Kooxda chelsea ayaa markii 6-aad ku dhacda kooxda Barcelona tartanka champions league wareega tooska loo haro kaliya kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona ayaa chelsea la kulmay inta ugu badan iyaga oo la kulamy 8 jeer.
** Barcelona ayaa wareega 8 dhamaadka champions league u gudubtay 6 ka mid ah 7-dii jeer ee ugu dambaysay ee ay la kulantay koox premier league ah marka laga reebo sanadkii 2011/2012 wakhtigaas oo ay chelsea ka reebtay tartanka wareega semi-finalka.
** Juventus ayaa laga reebay tartanka 5-tii jeer ee ugu dambaysay ee ay wareega tooska loo haro champions league la kulantay koox England ah.
** Kooxda Basel ayaa laga badiyay 4 ka mid ah 14 kulan oo champions league ah oo ay la ciyaartay koox England ah 5 kulan way badisay, 5 kale baro-baro ayay gashay 4 kulana waa laga badiyay.
** Lionel Messi ayaa chelsea ka hor yimid noloshiisa ciyaareed 8 kulan isaga oo dhamaantood baxay isaga oo aan wax gool ah ka dhalin inkasta oo 29 laag ku laagay goolkooda.
** Tababaraha Kooxda PSG ee Unai Emery ayaan waligii ku badin garoonka Santiago Bernabéu 10 kulan oo uu ku ciyaaray tartamada oo dhan 9 guuldaro ayay kala kulmay hal kulana bar-baro ayay ku galay.
** Kooxaha Juventus Iyo Tottenham ayaa isku aaday markii ugu horaysay ee tariikhdooda ee tartanka champions league.
** Markii Ugu dambaysay ee ay Wada ciyaaraan kooxaha Liverpool iyo Fc Porto ayaa ahayd saandkii 2007 waxana lugtii 1-aad 4/1 ku badisay kooxda Liverpool halka ay lugtii 2-aad bar-baro 1/1 ah galeen.